Sida loo qoro nuxurka halka ay booqdeyaashu ku qiimeeyaan qiimahaaga | Martech Zone
Sida Loo Qoro Mawduuca Halka Martidu Ay Ku Go'aaminayaan Qiimahaaga
Axad, Maarso 3, 2013 Axad, Maarso 3, 2013 Douglas Karr
Iyadoo aan loo eegin qiimaha, qiimaha had iyo jeer waxaa go'aamiya macmiilka. Had iyo jeerna, qiimahaasi wuxuu ku tiirsanaan doonaa sida wanaagsan ee macaamilku uga faa'iideysto badeecadaada ama adeeggaaga. Qaar badan oo ka mid ah softiweerrada ama adeegga (SaaS) iibiyeyaasha ayaa adeegsada iibinta qiimaha ku saleysan si ay u go'aamiyaan qiimahooda. Taasi waa, halkii ay ka qiimeyn lahayd bille bille ah ama sicir ku saleysan adeegsiga, waxay la shaqeeyaan macmiilka si loo go'aamiyo qiimaha ay soo bandhigi karto ka dibna ay u shaqeyso taas oo dib ugu laabaneysa qiime u siman labada dhinac.
Waa tan tusaale… suuqgeynta iimaylka. Waxaan iska diiwaan gelin karaa hal adeeg oo suuq-geyn ah iimayl ah $ 75 bishiiba ama waxaan raaci karaa adeegga ugu sarreeya ee $ 500 bishiiba. Haddaanan kor u qaadin iimaylka iyo u isticmaal inay ku kacdo, ku hesho ama ku haysato macaamiisha, $ 75 bishii waa qiimo yar waana laga yaabaa aad u badan lacag lagu bixiyo. Haddii aan raaco adeegga $ 500 bishii ee ay iga caawiyaan horumarinta farriinteyda, waxay iga caawiyeen hirgelinta ololeyaal kor u qaadis, hanasho iyo haynta… Waan ku guuleysan karaa ka faa'iideysiga emaylka si aan u wado boqollaal kun oo doollar. Taasi waa qiimo weyn oo aad u qiimo badan lacagaha la bixiyay.
Waxaa jira sabab sababta suuqleyda isticmaal boqolleyda soo bandhigiddooda si ay u bixiyaan caddeyn ah kororka qiimaha alaabtooda iyo adeegyadooda. Haddii aan u wareego badeecadaada oo ay iga badbaadin karto 25% khidmadaha lacag bixinta, tusaale ahaan, taasi macnaheedu waa kumanaan doolar ganacsiga. Laakiin haddii ay meheraddaadu bixiso lacag malaayiin doollar ah, qiimaha badeecaddu aad iyo aad ayey uga sarreeysaa ganacsigaaga kan aan leeyahay.
Suuqyayaashu badanaa qalad bay ka gaaraan qeexitaanka a talada qiimaha gaarka ah taasi waxay qeexaysaa qiime shakhsiyeed oo ku saleysan aragtidooda. Tani waxay u horseedi kartaa farqi u dhexeeya waxyaabaha laga filayo inta u dhexeysa waxaad u maleyneyso in qiimahaagu yahay iyo wuxuu macaamilku ku aqoonsanayo qiimahaagu inuu yahay. Tusaale: Waxaan la shaqeynaa macaamiil badan oo ku saabsan Mashiinka Raadinta. Macaamiisha leh barnaamijyo adag, suuq-galka agile iyo geeddi-socodka horumarinta, oo waxay hirgelin karaan isbeddello muhiim ah oo looga jawaabayo dalabaadka makiinadaha raadinta waxay ka helaan qiimo aan caadi ahayn adeegyadayada. Macaamiisha aan dhageysan, aan fulinin isbedelada, iyo kuwa caqabad ku ah talooyinka aan soo jeedinno inta badan wey dhibaatoodaan mana ogaadaan qiimaha buuxa ee aan bixin karno.
Markaad qoreyso waxyaabaha ku saabsan suuqgeyntaada, waxaa jira xeelado kaa caawin doona:
Ka faa'iideyso boqolleyda warbixinnadaada qiimaha si dadka soo booqda ay u sameeyaan xisaabta una xisaabiyaan keydinta iyo hagaajinta warbixinnada dakhligooda halkii ay ka ahaan lahaayeen macaamiishaada.
Bixi xaalad dhacdo adeegsi ah, daraasad kiis, iyo hababka ugu fiican ee ka caawiya martidaada inay go'aamiyaan qiimaha aad u leedahay ururkooda.
Bixi nuxur si toos ah ula hadlaya warshado gaar ah, noocyada shirkadda, iyo dhagaystayaasha si martidaadu u hesho iskaga mid ahaanshahaaga iyo ganacsigooda.
Ka soo bixi markhaatiyo macaamiil fara badan, cinwaankooda iyo jagooyinka ay ka hayaan shirkadda, sidaa darteed kuwa go'aannada gaara ee u dhigma cinwaannadaas iyo jagooyinkaas ayaa iyaga la aqoonsan kara
Qaar ka mid ah dadka ayaa aaminsan in suuq-geynta iyo iibinta qiimaha ku saleysan ay xoogaa khiyaano yihiin. Waxay aaminsan yihiin in qof walbaa bixiyo qiimo isku mid ah. Runtii waxaan ku doodi lahaa ka soo horjeedka. Shirkadaha leh sicir barar aan loo eegin macmiilka iyo sida ay uga faa'iideysan karaan alaabadaada iyo adeegyadaada. Xitaa ka sii xun - suuqgeynta dammaanad qaadaysa booqashooyinka, darajooyinka, dakhliga, iwm waa kuwo cabsi badan. Iyagu waa kuwo horay loo soo raray, waxqabadyo lacag-hoos u dhig ah si aad lacagtaada u isticmaasho oo aad uga tagto markii aadan helin natiijooyinkii ay ballanqaadeen. Waxaan door bidi lahaa inaan la shaqeeyo iibiye i dhageystay, fahmayna kheyraadkeyga, aqoonsaday baahidayda, kana shaqeeyey inaan bixiyo qiimo labada miisaaniyadayda daboolay oo siiyay qiimaha aan ubaahanahay
Tags: qiimahaqiimeeyn soo jeediniibinta qiimahaiibinta qiimaha ku saleysan
Warbixinta Raadinta Xogta 2012